Sales Driver | A-G-T Company Limited ﻿
12.10.2019, Full time , Distribution / Logistic
•	အရောင်းစီမံချက်အား အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်း။
•	ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ခြင်း။ သတင်းအချက်အလက်များ စုဆောင်းတင်ပြခြင်း။
•	New Outlet များရှာဖွေခြင်းနှင့် ထိန်းသိမ်းခြင်း။
•	မော်တော်ယာဉ်အား ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်း။
•	မန်နေဂျာသို့ နေ့စဉ်၊ အပတ်စဉ်၊ လစဉ် အစီရင်ခံစာတင်ပြရခြင်း။
•	တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ ဘွဲ့ရရှိပြီးသူဖြစ်ရမည်။ အသက် (၂၀) မှ (၃၀) နှစ်အတွင်းဖြစ်ရမည်။
•	ဖုန်းနှင့် အိမ်သုံးလျှပ်စစ်ပစ္စည်း များကိုကျွမ်းကျင်စွာ ရောင်းနိုင်သူဖြစ်ရမည်။
•	သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး (၂) နှစ်ရှိရမည်။
•	ကျွမ်းကျင်စွာမောင်းနိုင်ပြီး နယ်ထွက်နိုင်သူ ဦးစားပေးမည်။ ပြောဆိုဆက်ဆံရေး ကောင်းမွန်ရမည်။
•	အသင်းအဖွဲ့နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။
Work location 150, Shwe Yinnmar St., Ward (13),Yankin, Yangon.
•	နေပြည်တော်ရုံးခွဲတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	Computerized ကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးပြုနိုင်ရမည်။ •	အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်ပြီး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	နယ်မှလာသူများ အဆောင်စီစဉ်ပေး� ...
•	To translation Myanmar-Chinese-Myanmar with communication between Myanmar and Chinese-speaking Technician & Engineers & supplier
•	Manage products, campaign management, customer order and inquiries on shop.com.mm •	Manage Facebook page of the company: content writing, product uploads, inbox reply. •	Work on project designs as requested by CEO and submit before mutually agreed deadline. •	Work with marketing & sales team to plan output design, e.g. A4 flyer, catalogue.
•	အလဲအဝင်အထွက်စာရင်းပြုစုခြင်း။ •	ပြန်ပေးစာရင်းသွင်းခြင်း။ •	အပျက်ပြင်ချပေးသောအလုံးရေနာမည်နှင့်တကွ စာရင်းသွင်းရခြင်း။ •	Sparepartများလိုပါက sparepart စာရင်းကိုင်သူထံမှတောင်းခြင်း။ •	အပျက်ပြင်ရန်ပစ္စည်းမ ...
•	To perform manufacturing or packaging process with batch manufacturing process, batch packaging record and standard operating system. •	Review the process with batch manufacturing process, batch packaging record and standard operating system. •	Ensure responsible for planning and scheduling the process as per specification. •	Providing advice and technical support. •	Recorded and monitoring the day to day operation for all machinery. •	Monitoring and maintenance that all machinery to be efficiency and actual work done. •	M ...
•	အသင်းအဖွဲ့ဖြင့် လုပ်ကိုင်နိုင်ရမည်။ နယ်ထွက်နိုင်ရမည်။
•	အသောက်အစားကင်းရှင်းသူဖြစ်ရမည်။နယ်ထွက်နိုင်ရမည်။ •	ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ပြီးအသင်း အဖွဲ့နှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။
•	အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်ပြီး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
• Make entry for all companies daily MIT accounting software transaction receipt/ payments transactions by basic from cashier cash book • Checked for all account code by income & expenditure (MIT Accounting Software) • Daily checked for bank transaction by account code (MIT Accounting Software) • Daily entry by MIT Accounting software by checked of general ledger balance • If HR leader want to seem all transaction, make its • Overview report for General Overhead Expense • Overview report for Daily In ...
• မော်တော်ယာဉ်နှင့် ပတ်သက်သောကိစ္စများ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။ • လုံခြုံရေးအဖွဲ့အား စစ်ဆေးပေးခြင်း။ • ပြည်တွင်း / ပြည်ပ ကား၊လေယာဉ်လက်မှတ်ဝယ်ယူခြင်း၊ ဗီဇာလျှောက်ထားခြင်း။ • Company မှတ်ပုံတင် သက်� ...
•	ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ပြီး အသင်းအဖွဲ့နှင့် ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
•	အရောင်းစီမံချက်အား အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်း။ •	ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ခြင်း။ သတင်းအချက်အလက်များ စုဆောင်းတင်ပြခြင်း။ •	New Outlet များရှာဖွေခြင်းနှင့် ထိန်းသိမ်းခြင်း။ •	မော်တော်ယာဉ်အား ထိန်းသိမ်းစော� ...
Sales Driver Sales & Marketing Jobs Joblesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss JobsInYangon A-G-T Company Limited Sales & Marketing Jobs Sales & Marketing Jobs Distribution / Logistic Jobs in Myanmar, jobs in Yangon